Halkee laga soo dejisan karaa bogga cusub ee Google Earth - Geofumadas
Abriil, 2008 Google Earth / Maps
Horeba dhowr ka mid ah ayaa ka hadlay version cusub iyo yaababkiisa.
Si aad u aragto dhammaan miquis ah in version cusub uu leeyahay, waxaan ku talinaynaa http://es.gearthblog.com/, ayaa durbadiiba ka hadlayay warka ku saabsan samada, kantaroolayaasha, iyo marka hore riyaaqa.
Gaar ahaan, waxaan jeclahay badhida cusub ee aad leedahay si aad u socoto, si wax ku ool ah oo loo xakameeyo soo noqoshada iyo qaabka.
Habeenkii ... waa mid xiiso leh.
Waxa ugu fiican, dhismayaasha 3D, kahor intaanad iska casilayn naftaada kheyraadka aad isticmaaleysay laakiin ma aqaan sida ay wax uga qaban doonaan ... si dhaqso leh ayey hoos ugu soo dhacaan. Waan awoodey inaan arko garoonka Orioles, labo balooga fog ... bil gudaheedâ € |
Laakiin noocaan, maadaama ay beta tahay, laguma soo dejisan karin ikhtiyaarka "caawimaad / hubso cusbooneysiinta internetka", marka waa inaad ka soo degsataa meeshan:
Post Previous«Previous Injineernimada baadhitaanka, oo laga heli karo Guatemala
Post Next ArcGIS la sinji Google EarthNext »